I-Audiense Insights: I-Audience Segmentation Intelligence kanye neSoftware Yokuhlaziya | Martech Zone
I-Audiense Insights: I-Audience Segmentation Intelligence kanye nesofthiwe yokuhlaziya
Isu elibalulekile kanye nenselelo lapho uthuthukisa futhi ukhangisa umkhiqizo ukuqonda ukuthi imakethe yakho ingubani. Abathengisi abakhulu bayasigwema isilingo sokuqagela ngoba sivame ukuchema endleleni yethu yokwenza izinto. Izindaba ezinganekwane ezivela kubakhi-zinqumo bangaphakathi abanobudlelwano nemakethe yabo ngokuvamile aziwuvezi umbono wababukeli bethu kungenxa yezizathu ezimbalwa:
Amathemba aphakeme kakhulu noma amakhasimende awawona amathemba amaphakathi noma angcono kakhulu noma amakhasimende.
Nakuba inkampani ingase ibe nesisekelo samaklayenti esibalulekile, akusho ukuthi inesisekelo samaklayenti esifanele.
Amanye amasegimenti awanakwa ngoba mancane, kodwa akufanele kube ngenxa yokuthi angaba nembuyiselo ephezulu ekutshalweni kwezimali kokumaketha.
Idatha yomphakathi iwumgodi wegolide wokwembula izethameli namasegimenti ngenxa yenani elicebile, elikhulu ledatha etholakalayo. Ukufunda ngomshini kanye nekhono lokucubungula leyo datha kunika amandla izinkundla ukuthi zibone ngobuhlakani amasegimenti ezithameli futhi zihlaziye ukuziphatha, kuhlinzeke ngemininingwane ebambekayo abakhangisi abangayisebenzisa ukuze baqondise kangcono, benze kube ngokwakho, futhi bathole imiphumela ephakeme ngayo.
Iyini i-Audience Intelligence?
Izethameli Intelligence amandla okuqonda izethameli ngokusekelwe ekuhlaziyweni kwedatha ngayinye kanye neqoqo elimayelana nabathengi. Izethameli Intelligence amapulatifomu ahlinzeka ngemininingwane ngamasegimenti noma imiphakathi ebumba lezo zithameli, i-psychographics yezethameli kanye nezibalo zabantu kuyilapho inamandla okuxhuma izingxenye zezethameli kunkundla yokulalela komphakathi nezibalo, amathuluzi okuthengisa anethonya, izinkundla zokukhangisa zedijithali nezinye izindawo zokumaketha noma zocwaningo lwabathengi.
I-Audiense Insights Audience Intelligence
I-Audiense isiza amabhrendi ukuthi akhombe izethameli ezifanele ngemininingwane esebenzayo esiza ukwazisa amasu okukhulisa ibhizinisi lakho. Nge-Audiense Insights, ungakwazi:
Khomba noma yiziphi izethameli noma ingxenye - I-Audiense ikuvumela ukuthi ubone futhi uqonde noma yiziphi izethameli, kungakhathaliseki ukuthi kucace noma kuhlukile kangakanani ukwenza ukuhlaziya kwezithameli zomphakathi. Hlanganisa kalula izinketho eziningi zokuhlunga lapho udala umbiko, njengamaphrofayili wabasebenzisi, ukuhlobana, izibalo zabantu kanye neqhaza lemisebenzi, udale amasegimenti ezithameli ezithandwa kakhulu. Ehlome nge I-Audiense Insights ungathola ubuhlakani bezethameli ukuze wenze izinqumo ezingcono zokumaketha, uvumelanise ukuqondisa kwakho, uthuthukise ukuhambisana futhi uqhube imikhankaso yokusebenza okuphezulu esikalini.
Ngokushesha qonda ukuthi obani abakha izethameli ozihlosile - I-Audiense Insights kuyasebenza ukufunda imishini ukuze uqonde ngokushesha ukuthi ubani owenza izethameli zakho ozihlosile, ngokuhlaziya ukuxhumana phakathi kwabantu abakulolongayo. Yeqa ukuhlukanisa ngokwesiko ngokusekelwe eminyakeni yobudala, ubulili kanye nendawo, manje usungathola amasegimenti amasha asuselwe kokuthakaselayo abantu kanye qonda imakethe yakho eqondiwe njengamanje ezingeni elijulile. Inkundla yabo yobuhlakani bezethameli ikuvumela ukuthi uqhathanise amasegimenti nezisekelo noma ezinye izethameli futhi udale amabhentshimakhi anamasegimenti ahlukene, amazwe noma ezinye izimbangi.
Umnikazi wedatha yakho – hlanganisa I-Audiense Insights ngedatha yakho noma okubonwayo. Vele ukhiphe imibiko yakho kuyo PDF or I-Power Point amafomethi okusebenzisa imininingwane efaneleke kakhulu ngababukeli bakho kumadekhi akho okwethulwa. Noma, thumela yonke imininingwane ku-a CSV ifayela ukuze ukwazi ukucubungula, ukwabelana noma ukuwahlanganisa kalula enhlanganweni yakho.
Ungawakha Kanjani Umbiko Wakho Wobunhloli Bezithameli
Nansi ividiyo efingqiwe yokuthi usetshenziswa kanjani I-AudienseUhlelo lwamahhala lokudala umbiko wemininingwane usebenzisa iwizadi yokudala izethameli eziyisisekelo. Ungavumeli igama eziyisisekelo ngikukhohlise nokho. Umbiko uhlinzeka ngezibalo zabantu, indawo, ulimi, umlando, iminyaka, ezenhlalo-mnotho, ukuhlobana komkhiqizo, ithonya lomkhiqizo, izithakazelo, ukuhlobana kwemidiya, okuqukethwe, ubuntu, indlela yokucabanga yokuthenga, imikhuba eku-inthanethi, nezigaba ezi-3 eziphezulu!
Yakha Ukuhlaziya Kwakho Kwamahhala Kwe-Audiense Insights
Ukudalulwa: Ngingumuntu ohlangene naye I-Audiense futhi ngisebenzisa isixhumanisi sami kulesi sihloko.
Tags: ukuhlaziywa kwezithameliubuhlakani bezethameliimibono yababukeliukuhlaziywa kwezithameli zomkhiqizoucwaningo lomkhiqizocompetitor intelligenceukuhlaziywa kwabathengiiphrofayili yomthengiukuhlaziya umlandeliukuhlukaniswa kwabalandeliukuhlaziywa komthonyaukwahlukanisaukuhlaziya izilaleli zenkundla yezokuxhumanaiphrofayili yenkundla yezokuxhumana
I-Marpipe: Abathengisi Abahlomisa Ngezikhali Ngobuhlakani Abadinga Ukuvivinya Futhi Bathole Ubuciko Besikhangiso Abawinayo